You are at:Home»Featured»ချင်းအမျိုးသားနေ့သမိုင်း
By admin on	 February 16, 2017 Featured
ချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုကျင်းပ သည့်အခါတိုင်းမိန့်ခွန်းများတွင် အဘယ့်ကြောင့်ကျင်းပ ရသနည်းဆို သည်ကိုအမြဲပြောလေ့ ရှိသော်လည်း ဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ဆိုပုံချင်းမတူကြပေ။ အချို့က… တိုက်သူကြီး၊ရွာသူကြီးစနစ်မှ စတင်၍ဒီမိုကရေစီစနစ်ပြောင်းလဲ အသုံးပြုရန်ဆုံးဖြတ် သည့်နေ့၊ချင်းပြည်အတွက် တိုက်သူကြီးစနစ် မှဒီမိုကရေစီစနစ် သို့ပြောင်း လဲရန်ဆုံးဖြတ်ရာ တွင်ချင်းပြည်အရပ် ရပ်မှလူ ထုဦးရေ၅၀၀၀ခန့် တက်ရောက်ပြီးဆုံးဖြတ်သည့် အတွက်စည်းလုံးမှုပြယုဂ်ဖြစ် သည့်နေ့၊အချို့ကမူ…ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ရက်နေ့သည်ချင်း သမိုင်းတစ်လျှောက် တွင်ချင်းအမျိုးသားများအတွက် အရေးကြီးသည့်နေ့ ရက်ဖြစ်သောကြောင့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ကျင်းပ ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း စသဖြင့်ရေးသားပြောဆိုကြသည်။ အချို့ကလည်း ခေတ် အဆက်ဆက် ချင်းတိုင်းရင်းသား ဘိုးဘွားများ အသုံးပြုခဲ့ကြ သည့်စနစ်ဖြုတ်ချ သည့်နေ့ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့ဟု မသတ်မှတ် သင့်ကြောင်း စသည်ဖြင့်ပြော ဆိုကြ သည်။ထို့ကြောင့် ချင်းအမျိုးသားနေ့ ပေါ်ပေါက်လာပုံကို ထိုအချိန်က ချင်းရေးရာ ကောင်စီမှတ်တမ်းများကိုးကား၍ပြန် လည်သုံး သပ်တင်ပြသွား မည်ဖြစ်သည်။ ချင်းအမျိုးသားနေ့ သည်၁၉၅၁ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ချင်းရေးရာ ကောင်စီအစည်းအဝေး မှဖြစ်ပေါ် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ချင်းအမျိုးသားနေ့ အကြောင်းလေ့လာရာတွင် ကျွန်ုပ်သည် ဖလမ်းမြို့ရှိလွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲ အခမ်းအနားတွင်ချင်းပြည် အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲနိုင်ရန် အတွက်ချင်းရေးရာကောင်စီ ၏ကြိုးပမ်းချက်များသမိုင်း၊ ၁၉၅၁ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့တွင်ကျင်းပသော ချင်း ရေးရာကောင်စီအစည်းအဝေး ၏ဆွေးနွေးချက်နှင့်ဆုံးဖြတ် ချက်မှတ်တမ်းများ ကိုသာ စူးစိုက်ဖော်ပြသွား မည်ဖြစ်သည်။
၁၉၅၁ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့ချင်းရေးရာကောင် စီအစည်းအဝေးအကြောင်း မဖော်ပြမီချင်းရေးရာဌာန၏ လွတ်လပ်ပြီးကာလကြိုးပမ်းချက် များအားဖော်ပြလိုပါသည်။ ၁၉၄၈ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ၄ရက်နေ့ တွင်မြန်မာနိုင်ငံ သည်ဗြိတိသျှလက်အောက်မှ လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။ ၁၉၄၇ခုနှစ်ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံ အခြေခံဥပဒေအပိုဒ်– ၅၊ချင်းဝိသေသတိုင်း အခန်း၊ ပုဒ်မ– ၁၉၆၊၁၉၇၊၁၉၈တို့ အရချင်းရေးရာကောင်စီ၊ ချင်းရေးရာဌာနနှင့် ချင်းရေးရာဝန်ကြီးတို့ပေါ်ပေါက် လာခဲ့ပါသည်။ ချင်းရေးရာဌာန၏ ပထမဆုံးလုပ်ငန်း အနေဖြင့်ချင်းတောင်တန်းတွင်ရှေး ယခင်ခေတ်အဆက်ဆက် မှဗြိတိသျှခေတ်အထိအသုံးပြုခဲ့ သည့်သက်ဦးဆံပိုင်စနစ်ဟောင်းကို ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ဖြင့် အစားထိုးရန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်ခဲ့ကြသည်။ ချင်းရေးရာဌာနက၁၉၄၈ ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ၂၂ရက်နေ့တွင် ၀န်ကြီးအဖွဲ့သို့ချင်းတောင် စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပေးရန်တင်ပြခဲ့ သဖြင့်၁၉၄၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၆ရက်နေ့တွင်ထိုကော်မရှင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအဖွဲ့တွင်ချင်းရေးရာ ၀န်ကြီးဦးဝမ္မသူးမောင်၊ စည်သူဦးသိမ်းမောင်(အေ– တီ– အမ်)နှင့်ဦးစိုးဝင်း (အမျိုးသားပညာဝန်ဟောင်း) တို့ပါဝင်ကြသည်။ကော်မရှင် ၏အဓိကရည်ရွယ် ချက်နှင့်လုပ်ငန်းများမှာ တိုက်သူကြီးများနှင့် သူကြီးများခံစားရသော စိတ်သဘောထားကိုတိကျစွာ စူးစမ်းရှာဖွေရန်၊တိုက် သူကြီများကောက်ခံလျက် ရှိသောအခွန်တော်ပပျောက်ရေး ကိုလှုံ့ဆော်ကြွေးကြော်လျက်ရှိသည့် လုပ်ငန်းများအပေါ်တွင် လူထု၏ဆန္ဒကိုစုံစမ်းရန်၊ အခြားတစ်ဖက် တွင်ထိုသို့ဖြုတ်ချရာ၌အစိုးရတွင် တတ်နိုင်သမျှငွေကုန်ကြေးကျသက်သာစေ ရန်၊အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲရာ၌ အစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့၏ အကျိုးကိုမထိခိုက်စေရန် ၊နည်းလမ်းများရှာဖွေ၍ အစိုးရထံသို့အစီရင်ခံစာနှင့် တကွထင်မြင်ယူ ဆချက်နှင့်ထောက်ခံချက် တို့ကိုပါတင်သွင်းရန်ဖြစ်သည်။ကော်မရှင်သည်၁၉၄၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၁၂-၁၈ရက်နေ့များ အတွင်းတီးတိန်မြို့နယ်၊ ဖလမ်းမြို့နယ်နှင့်ဟားခါးမြို့နယ်တို့တွင် လူထုကိုယ်စားလှယ်၊တိုက်အုပ်၊ သူကြီးများနှင့် တွေ့ဆုံပြီး၎င်းတို့၏ ဆန္ဒကိုသွားရောက်စုံ စမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။
ယင်းသို့ စုံစမ်းစစ်ဆေးစစ်ဆေးမှုများပြုလုပ် နေစဉ်၁၉၄၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ၁၉-၂၂ရက်နေ့ များ အထိဖလမ်းမြို့၌ ကျင်းပခဲ့သော လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲ လူထုညီလာခံသဘင်ကျင်းပခြင်းနှင့်တိုက်ဆိုင် ခဲ့ပါသည်။ လူအများကဖလမ်းမြို့လူထုညီလာခံ သည်တိုက်သူကြီးများဖြုတ်ချနိုင်ရေး အတွက်လူထုဆန္ဒကောက်ခံ ရန်ကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်ဟုထင်မှတ်ကြသည်။ အမှန်စင်စစ်ဤညီလာခံသည် လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပရန် အတွက်စီစဉ် ရခြင်းဖြစ်သည်။ လွတ်လပ်ရေနေ့သည်ဇန်န၀ါရီလ (၄) ရက်နေ့ တွင်ရရှိခဲ့သည်မှန်သော်လည်း ဖလမ်းမြို့ သို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတ ကိုယ်တိုင်နှင့်နိုင်ငံတော် အကြီအကဲများတက်ရောက်ရန်ဖြစ် သောကြောင့်ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၉-၂၂ရက်နေ့ များ တွင် ကျင်းပရခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုညီလာခံအတွက်အစိုးရမှ ဘက်ဂျက်ရူပီးငွေ၂၁၀၀၀ကိုခွဲဝေချထားသည်။ထိုအချိန်ကချင်းဝိသေသတိုင်းအရေးပိုင်မင်း(Deputy Commissioner) Pu R. Tuang Hmung ၏အစီရင်ခံစာ[i] (Annual Report for 1948)တွင်ဖလမ်းမြို့လွတ်လပ်ရေးအောင်ပွဲညီလာခံနှင့်ပက်သက်၍ ….
မြို့နယ်တစ်ခုချင်းထံမှငွေသား၂၀၀၀စီပါဝင်ကြသည်။ ဖလမ်းမြို့ရှိပြည်သူ့ရင်ပြင်(ယခုဟရန်ထီးယိုးအားကစားကွင်း) တွင်ရိုးရာအက များနှင့်ရိုးရာခေါင် ရည်များသောက်သုံးကြသည်။ ချင်းသမိုင်းတွင်ပထမဆုံးအကြိမ် အဖြစ်ပြည်မမှအငြိမ့်အကအဖွဲ့က လည်းချင်းပြည်သူများအားဖျော်ဖြေကြသည်။နောက် တစ်နေ့ (ဖေဖော်ဝါရီ၂၀) တွင်အစိုးရမှဦးဆောင်ပြီးလွတ်လပ်ရေးအောင် ပွဲအတွက်လူထုအစည်း အဝေးကြီးပြုလုပ်ကြသည်။ ချင်းဝိသေသတိုင်းတစ်ခုလုံးမှ ကိုယ်စားလှယ်များလည်း တက်ရောက်ကြသည်။နိုင်ငံတော်သမ္မတ စပ်ရွှေသိုက်၊ချင်းရေးရာ ၀န်ကြီးဦးဝမ္မသူးမောင်၊ ၀န်ကြီးဦးညိုထွန်းနှင့် တိုင်းမင်းကြီးစည်သူဦးသိမ်းမောင် တို့လည်းတက်ရောက်ကြသည်။ ချင်းသမိုင်းတွင် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် အဖြစ် ကန်ပက်လက်နှင့်ပလက်ဝ (ထိုအချိန်ကရခိုင်တောင်တန်း) နုယ်တို့မှ ကိုယ်စားလှယ်များ လည်းပါဝင်လာကြသည်။ တက်ရောက်လာကြသောဧည့်သည်များ မှာ၅၀၀၀ဦးခန့်ရှိပြီးချင်းတောင် ကဲ့သို့သောနေရာမျိုးတွင် ယင်းကဲ့သို့လူဦးရေများပြား စွာဧည့်သည်တော်များလက် ခံနိုင်ခြင်းကိုအံ့အားသင့်လောက် သည်။ ညီလာခံအတွက် အစိုးရမှ ဘက်ဂျက်ရူပီးငွေ ၂၁၀၀၀လျာထားသော် လည်း စုစုပေါင်းကုန်ကျစရိတ်မှာ ရူပီးငွေ ၄၀၀၀၀ ဖြစ်သည်။ ဤပွဲတော် သည်အောင်မြင်သော ပွဲတော်ဟုမှတ်ထင် ရပါသည်။ ပွဲတော်အပြီး တစ်နှစ်ကျော် အထိ ဂျစ်ကားသမားများ၊ အစားအသောက်နှင့် အခြားဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့သည့် သူများမှာမူ ယခုအချိန်အထိ ပိုက်ဆံမရရှိခဲ့ကြသေးကြောင်း …… ၎င်းအစီရင်ခံစာတွင် မှတ်တမ်းတင်ထားသည် ကိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။
အစိုးရမှပေးထားသည့် ဘက်ဂျက်နှင့်ပွဲတော်အတွက်ကုန်ကျစရိတ်မှာနည်း လှသည့်စရိတ်မဟုတ်ပေ။ ထိုခေတ်ထိုကာလ တွင်တပ်မတော် စစ်သားတစ်ဦး၏ လစာငွေသည်တစ်လလျင်ရူပီး၁၅၊ အစိုးရ၀န်ထမ်းအရာရှိတို့၏ ပျှမ်းမျှတစ်လ၀င်ငွေမှာ ရူပီး၃၀နှင့်နွားနောက် တစ်ကောင်သည်ရူပီး၂၀ရှိသည်။ ထိုအခမ်းအနားသို့ပြည်ထောင်စုသမ္မတ စပ်ရွှေသိုက်ကိုယ်တိုင်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးမိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့သည်။ နယ်အသီးသီးမှကိုယ်စားလှယ်များ လည်းပွဲတော်အတွက်ဖလမ်းမြို့သို့ရောက်ရှိခဲ့ကြသည်။ ပလက်ဝနယ်မှလာရောက် သူတစ်ဦးသည်ခြေလျင် ခရီးဖြင့်ဖလမ်းသို့ အရောက်လျှောက် လာခဲ့သည်။ထိုနည်းတူစွာ ပင်ကန်ပက်လက်၊ တီးတိန်၊ဟားခါးနှင့်မတူပီတို့မှ လည်းလာရောက်ခဲ့ကြခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ ဟားခါးနယ်ဝန်ထောက်ကလည်း တိုက်သူကြီးများအားတက်ရောက်ရန် အမိန့်ပေးခဲ့သည်။ ဖလမ်းနယ်မှတိုက်သူကြီးများ မှလည်းရွားသားများအား ညီလာခံသို့အတင်းတက်ရောက်စေခဲ့သည်။ လူထုအချို့မှာမူနိုင်ငံရေး အသိအမြင်ကြောင့်ညီလာခံသို့ တက်ရောက်လာခြင်းမျိုးမဟုတ် ဘဲပြည်ထောင်စုသမ္မတ စပ်ရွှေသိုက်၊ချင်းရေးရာဝန် ကြီးဦးဝမ္မသူးမောင်းနှင့် နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲ များအားမြင်တွေ့ချင်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ညီလာခံတက်ရောက် သူတစ်ချို့ရဲ့ပြန် လည်ပြောပြချက် အရညီလာခံ တက်ရောက်သူများ အတွက်အစိုးရမှလမ်း စရိတ်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်[ii]။
၁၉၄၈ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ ရက်နေ့ ဖလမ်းမြို့၌ကျင်းပသော လူထု၅၀၀၀ကျော်တက်ရောက် သည့် လူထုအစည်းအဝေးပွဲတွင် အကြောင်း အရာများစွာဆွေးနွေးကြသည်။ ယင်းအစည်းအဝေး အစီအစဉ် တွင် ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးနှင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေ အကြောင်းများဆွေးနွေးကြသည်။ ထိုသို့ဆွေးနွေးရာ အစပထမတွင် အကြီးအကဲအတွင်းမှ ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦး၊ လူထုမှကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနှင့် တစ်နယ်လျှင်နယ်ဝန်ထောက်တစ်ဦး စီသာပြောဆိုခွင့်သတ် မှတ်ထားသော်လည်းလူများ စွာပါဝင်ဆွေးနွေးကြတော့သည်။ ထို့နောက်လူအများစောင့်ဆိုင်းနေကြသော အကြီးအကဲအုပ်ချုပ်ရေးဝန် အစားထိုးရန် တီးတိန်နယ်မှဦးထောင်းဇာကိုင်က အဆိုတင်သွင်းရာဖလမ်းမြို့မှ ဦးဆွမ်းမန်နှင့်ကန်ပက်လက် မှဦးထန်းမောင်းတို့ ကထောက်ခံကြသည်။ အဆိုကိုတက်ကြွစွာဖြင့် အချိန်အတန်ကြာအောင်ဆွေးနွေးကြရာ ကန့် ကွက်သူများရှိသဖြင့်အခမ်းအနား သဘာပတိကမဲခွဲရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုကိုထောက်ခံမဲ ၅၀၀၀နှင့် ကန့်ကွက်သူ၁၇မဲဖြင့် အတည်ပြုခဲ့ကြသည်[iii]။
စုံစမ်းရေးကော်မရှင် သည်ဖလမ်းလူထုအစည်း အဝေးကြီးအပြီးဖေဖော်ဝါရီလ၂၂မှ၂၆ရက်နေ့ အထိစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းများ ထပ်မံဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပြီး လူထုအများစုကတိုက်သူကြီးများ အုပ်ချုပ်သည့်စနစ်ကိုအစားထိုးရန်ဆန္ဒ ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြသော်လည်း ချင်းတောင်အခြေအနေမှာတင်းမာနေဆဲပင်ဖြစ်သည်။ကော်မတီ သည်အစိုးရ၀န်ထမ်းများ၏ အယူအဆကို လည်းမေးမြန်းကြရတော့သည်။ ချင်းဝိသေသတိုင်းမှ နယ်ဝန်ထောက်များ၏ တရားဝင်အစည်းအဝေး ကိုဖေဖော်ဝါရီလ ၂၆ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပကြရသည်။ကော်မရှင်သည်၎င်း၏အစီရင်ခံစာ ကို၁၉၄၈ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ၃၀ရက်နေ့ တွင်မြန်မာနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးများ အဖွဲ့ သို့တိုက်သူကြီးများ အားမနစ်နာစေ ရန်ပင်စင်ထောက်ပံ့ကြေးများပေး ရန်၊ရှေးခေတ်မှ အသုံးပြုသောပဒေသရာဇ် အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်ကိုဒီမိုကရေစီနည်း ကျအုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်ပြောင်းလဲရန်တင် သွင်းခဲ့ကြသည်။ ထိုအစီရင်ခံစာသည် ချင်းတောင်တစ်ခွင်တွင်စုံစမ်းခြင်းပြုလုပ်သည့် အဖြေများဖြစ်သည်နှင့်အမျှလူထုဆန္ဒ ကိုပေါ်လွင်စေသည်။နိုင်ငံတော် ၀န်ကြီးများအဖွဲ့မှလည်းစုံစမ်းရေးကော်မရှင်၏ အဆိုတင်သွင်းမှုများကိုထောက်ခံခဲ့သည်။ ချင်းရေးရာကောင်စီသည် ချင်းဝိသေသတိုင်းတွင် အသုံးပြုမည့်ချင်းဝိသေသတိုင်းဥပေဒေ (၁၉၄၈) ကိုရေးဆွဲခဲ့ကြသည်။ ထိုအက်ဥပဒေကို ၁၉၄၈ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁၂ ရက်နေ့ တွင် ကျင်းပသော၆ကြိမ်မြောက် တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်(ပါလီမန်) ညီလာခံက အတည်ပြုခဲ့သည်။ ဤအက်ဥပဒေအရဗြိတိသျှ တို့ရေးဆွဲထားသော ၁၈၉၆ခုနှစ်ချင်းတောင်တန်း အက်ဥပဒေကိုဖျက် သိမ်းပြီးချင်း လူမျိုးများကိုယ် တိုင်ရေးဆွဲသော ၁၉၄၈ ချင်းဝိသေသတိုင်း အက်ဥပဒေအားစတင်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဦးဝမ္မသူးမောင်ခေါင်းဆောင်သောချင်းရေးရာကောင်စီ သည်အုပ်ချုပ်ရေးပြောင်းလဲခြင်းနှင့် အခြားလုပ်ငန်းများဖြင့်၁၉၄၈-၁၉၄၉ခုနှစ်အတွင်း လုံးပန်းကြိုးစားခဲ့ကြရသည်။ ချင်းလူမျိုးတို့သည်လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်သည် ကိုထင်ရှားသိသာစေ ရန်နှင့်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံ တွင်အရေးပါသော လူမျိုးဖြစ်သည့် အထိ်မ်းအမှတ်ကျင်းပရန်အရေးကြီးလိုအပ် သည်ကိုလည်းအသိ အမှတ်ပြုလာကြသည်။
၁၉၅၀ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ ၉ရက်နေ့၌ကျင်းပသောချင်းရေးရာကောင်စီ အစည်းအဝေးတွင်ချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုမည်သည့် အတွက်လိုအပ်ကြောင်းနှင့် ထိုနေ့ထူးနေ့မြတ်အတွက် ချင်းသမိုင်းတွင်အရေးကြီးသောနေ့ရက် တစ်ရက်ရွေးချယ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် ဤအစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ချက်သည်သာလျင်ချင်းအမျိုးသားနေ့သမိုင်း အတွက်အရေးကြီးဆုံး အထောက် အထားဖြစ်သည် ဟုယုံကြည်မိပါသည်။ ၁၉၅၀အောက်တိုဘာလ၉ရက်နေ့ တွင်ကျင်းပသောချင်းရေးရာကောင်စီ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း[iv]အဆိုအမှတ် (၂) တွင် ….
ဦးဝမ္မသူးမောင်း (ချင်းရေးရာဝန်ကြီး၊ကန်ပက်လက်နယ်အမတ်)။ ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရန်ဟူသော အဆိုကိုတင်သွင်းရခြင်းမှာအမျိုးသားနေ့ ဆိုတဲ့အထိမ်းအမှတ် ကိုကမ္ဘာနဲ့ အ၀ှမ်း သတ်မှတ်ကြတဲ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ ရှိတဲ့အပြင်ချင်းအမျိုးသားတွေမှာ လည်းချင်းအမျိုးသားနေ့ရှိသင့် တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက် ဒီအဆိုကိုတင်သွင်းရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဦးဝမ္မသူးမောင်။ ချင်းအမျိုးသားနေ့သတ်မှတ်ဖို့ ကိစ္စနဲ့စပ်လျဉ်းပြီးအနည်းငယ်ပြောလိုပါတယ်။ ဒီကိစ္စနဲ့ ပက်သက်လို့ချင်းဝိသေသတိုင်းမင်းကြီးအခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့ နေ့သုံးနေ့ကိုမူတည်ပြီးဆွေးနွေး ခဲ့ဖူးပါတယ်။ အပြီးသတ်ဆုံးဖြတ်အတည်မပြုရသေးပါဘူး၊ အဲဒီသုံးနေ့ကတော့
ပထမ – မေမြို့ကိုစုံစမ်းရေး (အင်ကွာရီ) ကော်မတီစေလွှတ်တဲ့နေ့။
ဒုတိယ-ချိ(ဖ်) (Chief) ခေါ်တိုက်သူကြီး တို့အုပ်ချုပ်မှုလက်အောက် ကနေဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးသစ် ကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ ဖလမ်းမြို့မှာ လူထုညီလာခံကျင်းပတဲ့ ၁၉၄၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ (၂၀) ရက်နေ့။
အဲဒီသုံးရက်အနက်မည် သည့်နေ့ကိုပြဌာန်းသင့်တယ် ဆိုတာဆွေးနွေးပြီး (ဤအစည်းအဝေးတွင်) အတည်ပြုဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကပ္ပတိန်မန်သုန်းနုန်း(တီးတိန်နယ်အမတ်)။ သဘာပတိကြီးခင်ဗျား…ဒီအဆိုနဲ့ ပက်သက်ပြီး ကျွန်တော်နည်းနည်းဝေဖန်ချင် ပါတယ်။ ၁၉၄၆ခုနှစ် မတ်လပင်လုံကွန်ဖရင့်၊ ၁၉၄၇ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီလကုန် ခါနီးဖေဖော်ဝါရီလမှာ ဒုတိယပင်လုံကွန်ဖရင့်၊၁၉၄၇ခုနှစ် မတ်လနဲ့ဧပြီလမှာတောင်တန်းဒေသအင် ကွာရာကော်မရှင်မေမြို့အစရှိတဲ့ အဆိုရှင်အမတ်မင်းတင်သွင်းတဲ့အတိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ ၁၉၄၆ခုနှစ် မတ်လမှာ ကျင်းပခဲ့ တဲ့ပင်လုံကွန်ဖရင့် မှာပြည်ထောင်စုနဲ့ တောင်တန်းဒေသရဲ့ အခြေအနေ၊ ဒုတိယပြည်မနဲ့ အဆက်အသွယ်ပြု လုပ်ဖို့အတွက်ပြည်မမှာရှိတဲ့ ခေါင်းဆောင်များ နဲ့တောင်တန်းဒေသမှာ ရှိတဲ့နယ်အသီးသီးမှ ကိုယ်စားလှယ်တွေကပြည်ထောင်စုထဲ မှာပေါင်းဖို့ သဘော တူပြီးနောက်၁၉၄၇ခုနှစ် ဇွန်လ၁၀ရက်နေ့ မှာပြည်မမှာရှိတဲ့ လူထုကိုယ်စားလှယ်အား လုံးစုပေါင်းပြီး တိုင်းပြုပြည်ပြုလွှတ်တော်ကို ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ခြောက်လတိုင် တိုင်လူထုကိုယ်စားလှယ်၂၅၀ဦးက ဆုံးဖြတ်တဲ့မူကိုဘိလပ် အစိုးရကလက်ခံအတည်ပြုပြီး ၁၉၄၈ခုနှစ်ဇန်န၀ါရီလ၄ရက်နေ့မှာ အချုပ်အခြာအာဏာပိုင်တဲ့ လွတ်လပ်ရေးကိုပေးခဲ့ပါတယ်။ လွတ်လပ်သောပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီးဖြစ်လာ တာနဲ့ အမျှတစ်ပြိုင်နက် ၁၉၄၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ ၂၀ရက် နံနက်၁၁နာရီ အချိန်မှာချင်း လူထုညီလာခံကိုဖလမ်းမြို့ မှာ ကျင်းပခဲ့တဲ့ အတွက်အုပ်ချုပ်ရေး မူဟောင်း ကနေ ဒီမိုကရေစီမူသစ်အုပ်ချုပ်ရေး ကိုပြောင်းလဲခဲ့တဲ့ အတွက်၁၉၄၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့နံနက်၁၁ နာရီအချိန်ကိုချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်ပြဌာန်း သတ်မှတ်ရန် အကောင်းဆုံး၊ အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်တယ် လို့ယူဆပြီး၎င်းနေ့ကို အတည်ပြုရန်လေးလေး နက်နက်ထောက်ခံပါတယ်။
ဦးဆံနိမ်း။ ကပ္ပတိန်မန်သုန်းနုန်းပြောတဲ့စကားထဲမှာ ကျွန်တော်ပြောလိုတာက ကျွန်တော်တို့တောင်ပိုင်းချင်းတောင် မှာဖေဖော်ဝါရီလဆိုရင် စပါးရိတ်သိမ်းချိန်ဖြစ်နေလို့ လူထုအများ အားလပ်ရက်မရနိုင်တဲ့ အတွက်ဒီဇင်ဘာလလောက်မှာ သတ်မှတ်ပေးဖို့ ပြော လိုပါတယ်။
ဦးလျင်ထုမ်း (ချင်းရေးရာကောင်စီသဘာပတိ)။ ဦးဆံနိမ်းကကပ္ပတိန်မန်သုန်းနုန်းအဆို ကိုထောက်ခံပါသလား (သို့မဟုတ်) ကန့်ကွက်ပါ သလား။
ဦးဆံနိမ်း။ဒီဇင်ဘာလ(သို့မဟုတ်) ဇန်န၀ါရီလ၂၅ရက်နေ့ကိုသတ်မှတ်ပေးဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
ကပ္ပတိန်မန်သုန်းနုန်း။ ကျွန်တော်ပြောနေတာ ကဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်တိုင်းမှာ လူထုအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ် ဖို့ အတွက်ပြော ဆိုထောက်ခံနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့ကိုချင်းအမျိုးသားနေ့လို့ သာအထိမ်းအမှတ်သဘောနဲ့ရှိစေဖို့ အတွက်ထောက် ခံနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ကပ္ပတိန်မန်သုန်းနုန်း။ မူလအဆိုမှာ (ချင်းအမျိုးသားနေ့)၊နောက်မှ (၁၉၄၈ ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့) အဖြစ် ထပ်မံဖြည့်စွက်ဖို့ အဆိုတင်သွင်းပါတယ်။
အမတ်အားလုံးသဘောတူ သဖြင့်အောက်ပါအတိုင်းအဆို ကိုပြင်ဆင်၍ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ် သတ်မှတ်ရွေးချယ် အတည်ပြုလိုက်သည်။
“ချင်းအမျိုးသားနေ့ကို ၁၉၄၈ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့ အဖြစ်ရွေးချယ်သတ်မှတ်လျှင် ယင်းကိစ္စကိုဆွေးနွေး ၍အတည်ပြုရန်”
“၁၉၄၈ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့နံနက်၁၁နာရီ အချိန်” ကို “ချင်းအမျိုးသားနေ့” ဟူ၍ချင်းရေးရာကောင်စီ မှရွေးချယ်သတ်မှတ် အတည်ပြုပါ သည်။
ဤချင်းရေးရာကောင်စီ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း သည်အရှင်းလင်းဆုံးနှင့် အခိုင်လုံဆုံးသက်သေအထောက် အထားဖြစ်သည်။ ဦးဝမ္မသူးမောင်၏ အကြောင်းပြချက်သည်ရှင်းလင်းသည်။ အဘယ်ကြောင့်ချင်းအမျိုးသားနေ့ရှိသင့်သနည်း။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အမျိုးသားနေ့များရှိကြသည့် အစဉ်အလာ ရှိသောကြောင့်သူ့အနေ ဖြင့်ချင်းလူမျိုးတို့သည် လည်းအမျိုးသားနေ့ရှိသင့်သည်ဟုယူဆခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုနေ့အတွက်ချင်းသမိုင်းတွင်အရေးကြီးသည့် နေ့သုံးရက်ထဲမှနေ့ရက် တစ်ရက်ဖြစ်သော၁၉၄၈ခုနှစ်၊ဖေဖော်ဝါရီလ၂၀ရက်နေ့အားရွေးချယ်ကြခြင်းဖြစ်သည်။
ချင်းရေးရာကောင်စီအစည်းအဝေးမှတ်တမ်း သည်ချင်းအမျိုးသားနေ့သမိုင်းပြောကြားရာတွင် အခိုင်လုံဆုံးသက်သေ အထောက်အထားဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာအနှံ့တွင်အမျိုးသားနေ့များရှိကြသည့် အစဉ်အလာရှိကြသည်။ ၎င်းတို့အမျိုးသားနေ့များ တွင်လူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်ကြသည်၊ လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ်တည်ရှိကြသည် ကို အထိမ်းအမှတ်ပွဲများဖြင့် ဆင်နွှဲလေ့ရှိကြသည်။ ထိုနေ့ထူးနေ့မြတ် အတွက်ရွေးချယ်ကြသောနေ့နှင့်အကြောင်းအရင်းမှာ မူမတူကြပေ။ ဥပမာ-နော်ဝေ၊ဒိန်းမတ်၊ အိန္ဒိယ၊မောလ်တာ၊ပိုလန်နှင့် စလိုဗားကီးယားစသည့်နိုင်ငံများတွင် ယင်းတို့နိုင်ငံနှင့်လူမျိုးအတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ စတင်ပြဌာန်း/သုံးစွဲသည့်နေ့ ကို၎င်းတို့၏ အမျိုးသားနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ အချို့နိုင်ငံများသည် ကိုလိုနီလက်အောက်ခံဘ၀မှ လွတ်လပ်ရေး ရရှိသောနေ့ကို အမျိုးသားနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ အချို့နိုင်ငံသည်လည်းယင်းတို့ နိုင်ငံဘုရင်မွေးနေ့အားအမျိုးသားနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ကြသည်။ ယင်းကဲ့သို့ကမ္ဘာအနှံ့တွင် အမျိုးသားနေ့များရှိကြသကဲ့သို့ ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးတို့သည် လည်းပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် အတွင်းရှိလူမျိုးတစ်မျိုး အဖြစ်ထာဝစဉ် ရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက်အမျိုးသားနေ့ လိုအပ်ကြောင်းချင်းရေးရာကောင်စီမှနား လည်လာခဲ့သည်။ ထိုနေ့အတွက်ချင်း သမိုင်း တွင်အရေးကြီးနေ့ထူးနေ့မြတ်ဖြစ်သော ၁၉၄၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၀ရက်နေ့အားချင်းအမျိုးသားနေ့ အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။ ချင်းရေးရာကောင်စီသည်ပြောင်းလဲနေသော ကမ္ဘာကြီးနှင့်အတူရင်ဘောင်တန်းလျှောက် လှမ်းနိုင်ရေးအတွက်အမြော် အမြင်ကြီးစွာဖြင့်ချင်းလူမျိုးအ တွက်ဆောင်ရွက်ကြခြင်းပင်ဖြစ် သည်။
လူမျိုးတစ်မျိုးတွင်အမျိုးသားနေ့ ရှိအံ့ရှိထိုက်သည့် အားလျော်စွာ ချင်းလူမျိုးတို့အတွက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုရုပ်လုံးပေါ်အောင် ချင်းရေးရာကောင်စီမှ ကောင်အထည်ဖော်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ချင်းအမျိုးသားနေ့အတွက် ချင်းသမိုင်းတွင် အရေးကြီးသောနေ့ရက် များထဲမှ ၁၉၄၈ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ၂၀ရက်နံနက်၁၁နာရီအချိန် တွင် ထိုအချိန်တုန်းက ချင်းဝိသေသတိုင်းမြို့တော် ဖလမ်းမြို့တွင် ကျင်းပသည့် လူထုညီလာခံ တွင် အုပ်ချုပ် ရေးမူဟောင်းကနေ ဒီမိုကရေစီမူသစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုပြောင်းလဲရန် ဆုံးဖြတ်သည့် နေရက် ကို ချင်းအမျိုးသားနေ့အဖြစ်ပြဌာန်း သတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်သည်။အုပ်ချုပ်ရေးမူဟောင်း ကိုရှုတ်ချနိုင်သည့် အတွက်အောင်ပွဲခံခြင်းမဟုတ်ပေ။ ထို့ကြောင့်ချင်းအမျိုးသားနေ့တွင် အုပ်ချုပ်ရေးမူဟောင်းဖြစ်သောရှေးခေတ်တိုက် သူကြီးစနစ်အားရှုတ်ချပြောဆိုမှုများ၊တိုက်သူကြီးများ အားဝေဖန်ပြောဆိုမှုများ မပြုလုပ်ရန်အရေးကြီးလှပေသည်။ ချင်းပြည်အရပ်ရပ်ရှိတိုက်သူကြီးများသည်ချင်းတောင်တန်း အတွက်လယ်မြေခွဲဝေရာတွင် လည်းကောင်း၊ အခွန်ကောက်ခံရာတွင် လည်းကောင်း၊ယဉ်ကျေးမှု နှင့်ထုံးတမ်းစဉ်လာများတွင်လည်းကောင်း ယင်းတို့ခေတ်နှင့်လျော်ညီစွာ အကောင်း ဆုံးစဉ်းစား တွေးခေါ်ကာအုပ်ချုပ်ခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်အပြီးတွင်ချင်းပြည်၏အနာဂတ်ခရီး အတွက်ဗြိတိသျှ၊ ဗမာနှင့်အခြား တိုင်းရင်းသားများဖြင့်အားကြိုးမာန်တက်ဆွေးနွေး ခဲ့ကြသည်။ ချင်းပြည်ကြီး အတွက်ပြည်မနှင့်တောင်တန်းတစ်ပြိုင် တည်းလွတ်လပ်ရေးရယူရန်အတွက်ပင်လုံစာချုပ်တွင် လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သူ များဖြစ်သည်။ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး တည်ထောင်ရာ တွင် လည်းစွမ်းစွမ်းတမံကြိုး ပမ်းကြသူများဖြစ်သည်။ ယင်းတို့၏ကြိုးပမ်းမှုကြောင့်ချင်းလူမျိုးတို့သည် လွတ်လပ် သောလူမျိုးအဖြစ်သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး ယင်းမှတဆင့်ချင်းအမျိုးသားနေ့ပါမွေးဖွားလာခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပါလော။ ထို့ကြောင့်ချင်းအမျိုးသားနေ့ တွင်တိုက်သူကြီးများနှင့်၎င်း တို့ကျင့်သုံးခဲ့သော စနစ်ရှုတ်ချပြောဆိုမှုများရှောင်ကြပါစို့။
ချင်းအမျိုးသားနေ့သည်ချင်းလူမျိုးများ အတွက်အလွန်မွန်မြတ်သည့်နေ့ထူးနေ့မြတ်ပင်ဖြစ်သည်။ ချင်းခေါင်းဆောင်များ အမြော်အမြင်ရှိစွာစတင်သတ်မှတ်သော ချင်းအမျိုးသားနေ့သည်ယနေ့အချိန်တွင်မူ ၆၉နှစ်မြောက်ရှိပြီဖြစ်သည်။အခုလိုနှစ်စဉ်နှစ် တိုင်းချင်းအမျိုးသားနေ့ အားစည်းကားသိုက်မြိုက်စွာကျင်းပနိုင်ခြင်းအားဖြင့်………………
ချင်းလူမျိုးတို့သည်ပြည်ထောင်စုမြန်မာနိုင်ငံတော်ကြီး အတွင်းတွင်နေထိုင်ကြသောလူမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်သည်ကိုကမ္ဘာ့ အလယ်တွင် အခိုင်အမာသက်သေ ထူနိုင်သည်။
ချင်းလူမျိုးတို့သည်ကိုယ်ပိုင်ယဉ်ကျေးမှု၊ စာပေနှင့်ကိုယ်ပိုင်ရိုးရာ ထုံးတမ်းဓလေ့ပိုင်ဆိုင်သောလူမျိုး တစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းကိုကမ္ဘာ့ အလယ် တွင်ပြသနိုင်သည်။
ချင်းလူမျိုးတို့သည် ချင်းလူမျိုးဖြစ်ရသည် ကို ၀င့်ကြွားစွာဂုဏ်ယူကြ သူများဖြစ်ကြောင်း ထင်းရှားစေပြီးမျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ကို လည်းပိုမိုခွန် အားတိုးစေသည်။
မျိုးချစ်စိတ်ဓာတ်ရှင် သန်ထက်မြတ်ပြီးတိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအကျိုးသယ်ပိုးထမ်းရွက်ဆောင်ရွက်ကြသူ များပိုမိုပေါများလာစေသည်။
(၆၉)နှစ်မြောက်ချင်းအမျိုးသားနေ့ကိုဂုဏ်ပြုပါသည်။ ချင်းအမျိုးသားနေ့သက်တော်ရာကျော်ရှည်ပါစေ။ ချင်းအမျိုးသားနေ့အားပျော်ရွှင်စွာဆင်နွှဲနိုင်ကြပါစေ …
([i]) ချင်းဖိုင်တွဲစာအမှတ်၇၇၊စာမျက်နှာ၁၃(University Historical Research Center, ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်)
([ii]) ၁၉၄၈ခုနှစ်ဖလမ်းမြို့တွင်ကျင်းပသောလူထုညီလာခံတက်ရောက်သူ Pu Sai Ling ၏ပြန်လည်ပြောပြချက်။
([iii]) ၁၉၅၁မင်းတပ်မြို့တွင်ကျင်းပသော ပထမဆုံးအကြိမ်ချင်းအမျိုးသားနေ့ အခမ်းအနားတွင်ချင်းရေးရာဝန်ကြီးဦးဝမ္မသူးမောင်းမိန့်ခွန်း၊ဖလမ်းနှစ်တစ်ရာပြည့်မဂဇင်း
([iv]) ချင်းရေးရောကောင်စီ အစည်းအဝေးမှတ်တမ်း၊ အမျိုးသားမော်ကွန်းဌာန ရန်ကုန်မြို့၊စာအမှတ် Acc-24084
Chin National Day by Hrangtar Nawnkhar. Hrangtar Nawnkhar conductedathorough research on this topic. He quoted mostly from Yangon, National Archive Department, Chin Files at Historical Research Centre, Yangon le University Historical Research Center, Yangon.
U Vum Thu Maung speech published in the Falam Centenary Magazine.
CNF အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ် Pu ZingCung ၏ ၆၆ နှစ်မြောက် ချင်းအမျိုးသားနေ့ မိန့်ခွန်း
လူနေအိမ် သမိုင်း အကျဉ်း အပိုင်း (၂)